Puntland: oo beenisay in lala wareegay garoonka diyaaraha Gaalkacyo - Wargane News
Home Somali News Puntland: oo beenisay in lala wareegay garoonka diyaaraha Gaalkacyo
Kadib markii qaar kamid ah warbaahinta ka howl gasha Koonfurta Soomaaliya ay baahiyeey warar ah in ciidamada Danab ee sida gaarka ah u tababaran ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka dageen garoonka diyaaradaha Gaalkacyo ayaa arintaasi waxaa beeniyey maamulka garoonka Gaalkacyo ee Puntland-Soomaaliya.
Siciid Cabdiraxmaan Dhega-weyne oo ah maareeyaha garoonka diyaaradaha Gaalkacyo ee Puntland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaay in ciidamada Danab ay la wareegeen garoonka diyaaradaha ee Cabdullaahi Yuusuf ee Gaalkacyo.
..Garoonka waa uu shaqeynayaa, iyadoo ay ka soo degeen diyaarado ka hawl-gala Soomaaliya, mana jirto ciidammo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo qabsaday ayuu yiri Siciid Cabdiraxmaan Dhega-weyne
Waxa uu intaasi ku daray maareeyaha garoonka diyaaradaha Gaalkacyo Siciid Cabdiraxmaan Dhega-weyne in Puntland ay ka mid tahay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, aysan jirin sabab ay ciidammo kale oo Soomaaliyeed ugu soo duulan garoonka.
Koox ka tirsan Ciidanka Danab ayaa shalay gelinkii danbe ka degey Garoonka Gaalkacyo, waxaana ay halkaas u tageen hawlgalo ka dhan ah ururka al-Shabaab Gobolka Mudug, ciidankan ayaa wada shaqeyn dhaw la leh Ciidamo kale oo ka dhisan qaar kamid ah maamul goboleedyada oo ay taageeraan dalka Maraykanku.
Puntland oo beenisay in lala wareegay garoonka diyaaraha Gaalkacyo (Dhegayso) • warganenews